CEO Business & Management Magazine » GOOD Books & Mobile Phones
GOOD Books & Mobile Phones
ဆိုင်တည်နေရာ . . .
Level 5၊ Dagon Center 2၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် . . .
မနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ် ထားပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက် . . .
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာပေနယ်ပယ်ကဖြစ်ပြီး စာပေ ကိုဝါသနာပါတာကြောင့် ဖွင့်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ချည်းပဲဆိုတာထက် Customer တွေလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဖုန်းအမျိုးမျိုးတွေကိုကြည့်လို့ရအောင် တွဲဖွင့် ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုင်ရှင် ကိုလင်းနိုင်ထွန်းက ပြော ပြခဲ့ပါတယ်။
ရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက . . .
စာအုပ်အမျိုးမျိုး၊ Handset & Accessories အမျိုးမျိုး စတာတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ Accessories တွေကို အမျိုးအစား စုံစုံလင်လင် တစ်နေရာတည်းမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အနာဂတ်ရည်မှန်းချက် . . .
အနာဂတ်မှာ Online Shopping အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားကနေ မြန်မာပြည်က ပစ္စည်းတွေကို မှာယူလို့ရရှိအောင်လုပ်ဆောင် သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဆိုင်အနေနဲ့လည်း ဆိုင်ခွဲတွေတိုးချဲ့ သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Tag: Good Books & Mobile Phones, New Business, Profile
British Columbia တက္ကသိုလ်ရဲ့ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Yves Tiberghien
Yangon Life Website ရဲ့ Founder Trinh Proctor
The Pizza Company မြန်မာရဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာနဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခေါက်